Lionel Messi Oo Go'aan Buuxa Ka Qaatay Mustaqbalkiisa & Wakhtiga Uu Ku Dhawaaqi Doono War Noqon Kara Midkii Ugu Weynaa Abid Kubadda Cagta - Gool24.Net
Lionel Messi Oo Go’aan Buuxa Ka Qaatay Mustaqbalkiisa & Wakhtiga Uu Ku Dhawaaqi Doono War Noqon Kara Midkii Ugu Weynaa Abid Kubadda Cagta
Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa lagu soo warramayaa inuu go’aan ka gaadhay mustaqbalkiisa kooxdaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay ahaa mid aan lugo adag ku taagnayn iyadoo lala xidhiidhinayay kooxo kale.
Messi iyo kooxdiisa Barcelona ayaa soo qaatay xilli ciyaareedkii ugu adkaa taariikhda dhaw ee kooxdaas iyagoo koob la’aan baxay markii ugu horreysay mudo 13 sano ah.
Marka laga yimaado in guud ahaan xilli ciyaareedku soo xumaa, kulankii waxkasta faraha ka saaray ee sida cad u sheegay heerka ay awood ahaan joogto Barcelona ayaa ahaa midkii ay kaga hadhay Champions League markaas oo ay Bayern Munich 8-2 ku garaacday.
Messi ayaa dhawaan kulan la yeeshay tababaraha cusub ee kooxdiisa ee Ronald Koeman iyadoo ay saxaafadu xustay inuu u sheegay in fursada uu kaga tagayo kooxdu ay ka badan tahay mida uu baaqiga ugu sii ahaanayo.
Messi ayaa kaddib markii ay hadalkaas saxaafadu baahisay la sheegay inuu aad uga xanaaqay in wixii gudaha kooxda ahaa ee ay ku wada sheekaysteen macalin Koeman banaanka loo saaray oo saxaafada la gaadhsiiyay.
Si kastaba, sida ay sheegayso warbaahinta dalka Argentina gaar ahaan il-wareedka Ole, Lionel Messi ayaa maalmaha soo socda ku dhawaaqi doona go’aanka uu ka gaadhay mustaqbalkiisa Barcelona.
Mustqbalka Leo ayaan ahayn mid saadaal geli kara, dabcan waxa hubaal ah inaysan jirin cid uga dhaw inuu waayihiisa ciyaareed oo dhan ku dhammaysto Barcelona waana sida ay u badan tahay balse marxalada kooxda ee dhawaanahan ayaa aragti kale keeni karta.